6. Sahajata Paccaya | Dhamma Training Center
May9th, 2020
Apr 25 th, 2020
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၆ – သဟဇာတပစ္စယော Sahajāta Paccayo (Presence condition) Sahajātapaccayo Paccayaniddeso ...
၆ – သဟဇာတပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi ၄၁၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ...
၆ – သဟဇာတပစ္စယော Sahajāta Paccayo (Presence condition) (3 of 6)
၆ – သဟဇာတပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၁၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု–၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား သဟဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ...
၆ – သဟဇာတပစ္စယော ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ သဟဇာတ Born together or conascence. သဟ = အတူတကွ၊ ဇာတ = ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Born together or conascence. သဟဇာတပစ္စည်း၏...
ပဋိသန္ဓေအဆင့်ဆင့် zawgyi အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဣန္ဒကူဋတောင် ဣန္ဒကဘီလူး၏ ဗိမာန်၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဣန္ဒကဘီလူးသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်လျက် ဂါထာဖြင့် ရွတ်ဆို လျှောက်ထား၏။ “အရှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားတို့သည် ရုပ်ကို ဇီဝဟူ၍...
၆ – သဟဇာတပစ္စယော Sahajāta Paccayo (Presence condition) (6 of 6)
အကြောင်းအကျိုးတရား Cause & effect zawgyi မြတ်စွာဘုရားရှင်က အကျိုးတရားတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရန်အတွက် အကြောင်းတရား ပေါင်းများစွာ ပေါင်းဆုံပေးရကြောင်း ဟောတော်မူပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ အကြောင်းတရား ပေါင်းဆုံသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သဘောတရားကို နားလည်လာသူအဖို့ တစ်စုံတစ်ဦးဦးသော တန်ခိုးရှင်၊ ဖန်ဆင်းရှင် Creator...